Booliska Kenya oo digniin ka soo saaray weeraro Al-Shabaab qorsheynayaan – STAR FM SOMALIA
Dowlada Kenya ayaa digniin amni kasoo saartay weeraro Alshabaab ka geystaan gudaha dalkaasi, waxaana booliska ay sheegeen iney la socdaand dhaqdhaqaaq Al-shabaab ka wadaan dhanka xuduuda.
Booliska dalka Kenya ayaa sheegay iney heleen xogo amaan oo la xiriira in Alshabaab qorsheynayaan iney isku urursadaan deegaanka Jadaheyle oo ku yaala xuduuda Soomaaliya iyo Kenya.
Joseph Boinet oo ah taliyaha ciidamada booliska Kenya ayaa sheegay in Alshabaab doonayaan iney isku qariyaan dadka xoolo dhaqata deegaanada xuduuda ah, isagoo sheegay iney qorsheeyeen weeraro ka dhaca gudaha dalka Kenya.
“ Qeybaha ay Suutagalka tahay in Laweerarro waxaa kamid ah Shaqaalaha Booliiska, Gawaaridda Dadweynaha ee isaga Goosha Deegaanadda Xuduuddda dhaca” ayuu yiri Joseph Boinet.
Taliyaha ayaa sheegay in ciidamada Kenya heegan buuxa la geliyay lagana warhayo dhaqdhaqaaqa cusub ee Alshabaab ka wadaan dhanka xuduuda.
Iran oo lagu eedeeyay hubka ay siiso Xuutiyiinta Yemen inay Somaliya u marsiiso